Nhau - Kushandiswa kweWMS muindasitiri yemishonga
Kushanda kweWMS muindasitiri yemishonga
Warehouse Management System (WMS), yakapfupikiswa seWMS, isoftware inotarisira nzvimbo yekuchengetera zvinhu. Izvo zvakasiyana neyekuverenga manejimendi. Mabasa ayo ari kunyanya muzvinhu zviviri. Imwe ndeye kuseta imwe nzvimbo yekuchengetera nzvimbo mune sisitimu yekudzora zvinhu. Kumisikidzwa kwenzvimbo yakatarwa yenzvimbo kutungamira mashandiro ezvekushandisa mukati, kunze, uye mudura nekumisikidza mamwe marongero muhurongwa.
Iyo sisitimu inobudirira inodzora uye inoteedzera iyo yese maitiro ekugadzirisa uye kudhura manejimendi bhizinesi rekuchengetera, inoziva yakakwana bhizinesi yekuchengetedza ruzivo manejimendi, uye inofambisa kushandiswa kwesitoro zviwanikwa.
Ikoji yezvishandiso cheni yeimwe indasitiri ine yakasarudzika. WMS haigone chete kugadzirisa zvinowanzoitika matambudziko ekugadzirisa zvinhu, asi zvakare kusangana nezvinodiwa zvega zvemaindasitiri akasiyana.
Ndeapi maitiro ekushandisa kweWMS muindasitiri yemishonga?
Iyo indasitiri yemishonga inogona kugovaniswa muindasitiri yemishonga uye indasitiri yemishonga inotenderera. Iyo yekutanga yakavakirwa mumajekiseni, mapiritsi, macapsule, nezvimwe, uye inowanzo shandiswa kune yakazara otomatiki mashandiro maitiro ekugadzira, kubata, kuchengetedza, uye kuchengetedza; iyo yekupedzisira inovhara yekumadokero mishonga, yechinyakare Chinese mushonga, uye zvekurapa zvishandiso, nechinangwa chekudzora kuwanda uye nekukurumidza uye kwakanaka mutero.
WMS inofanirwa kuita uye nekuona kudzora kwakasimba uye kutsvaga kwenhamba dzezvinodhaka mumabasa ese ekurapa. Mukuita uku, inofanirwa zvakare kuona kudzora kwehunhu hunodhaka. Panguva imwecheteyo, inofanirwawo kunge ichibatana neyemagetsi yekutarisa kodhi system munguva chaiyo. Chibvumirano chega chega chekutenderera chinoziva kuwanikwa kweiyo kodhi inodzora zvinodhaka, kubvunza kweruzivo rwekushandisa kodhi kodhi uye kurodha ruzivo rwezvinodhaka